Izinguquko kwiBMW X3 eyakhiwa kuleli
Ngaphakathi iBMW X3 ifika ne centre console eshintshile netouchscreen infotainment system engadingi ukuthi wengeze imali
Fanelesibonge Bengu | October 8, 2021
IMOTO: BMW X3
SEKUWUMLANDO ukuthi iBMW X3 yakhiwa lapha eNingizimu Afrika efemini yakwaBMW eRosslyn ngaphandle kwasePitoli.
Lokhu kwaqala kusuka ngo-2018 ngemuva kokuthi kuyekwe ukwakhiwa kweBMW 3 Series. I-X3 isingenye yezimoto zakwaBMW ezidayisa kakhulu emhlabeni jikelele njengoba kwaziwa ukuthi abantu bayazifela ngamaSport Utility Vehicle (SUV) kwaBMW abawabiza ngokuthi ngamaSport Activity Vehicle (SAV).
Ekupheleni kuka-Agasti zijikile izinto efemini iX3 yengezwa izinto ezithile ezizoyenza iqhubeke nokuheha kwazise ibisihanjelwa yisikhathi nokuyiyo ebiyethulwa kwabezindaba kuleli sonto.
Phakathi kwezinto ezishintshile kubalwa i-grille ngaphambili esinkudlwana, amalambu aseyizibaca angamaLED (uma uthanda ufaka amaBMW Laser Light) ne-apron ngaphambili. Amarimu aseqala ku-19 inch hhayi ku-18 inch njengaphambilini.
Ngemuva amalambu azishaya saweX5 bese kuthi nezinqawe ezimbili zashintsha indlela ezime ngayo.
Uma uthatha i-M sports package khona uzofica ama-air inlets amakhulu amnyama. I-grille, ama-roof rails ungakwenza kube mnyama. Amarimu ayo angu-20 inch bese kulunguza ama-brake calipers abomvu noma aluhlaza okwesibhakabhaka.
Uma ubona u-M kwi-grille, izibuko ezehlukile namarimu angu-21 inch ubokwazi ukuthi yiM40i leyo.
Izinguquko ziyenza ihehe ikakhulukazi nombala omusha u-M Brooklyn Grey.
Ngaphakathi kune-touchscreen infotainment system engu-12.3 inch evele idonse amehlo nefika nayo ngaphandle kokwengeza imali. Ukwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay/Android Auto ngaphandle kwentambo, ithumela ama-update emoto nge-internet, iveza inkombandlela nokunye. Izihlalo zesikhumba ezingama-sports seats nazo awuzikhokheli.
I-centre console enamabhathini okuyidumisa, igiya nokunye nayo ishintshile.
I-X3 ingenye yezimoto ezivulekile ngaphakathi esigabeni sayo nokwenza abagibeli bahlale kahle kanjalo nempahla ngemuva.
IBMW X3 M40i nombala omusha u-M Brooklyn Grey Isithombe: FANELESIBONGE BENGU
Izinjini efika nazo zihlukene kahlanu. Kukhona ezikadizili ezintathu ezitholakala kwi- sDrive18d enamandla angu-110kW, xDrive20d ekhahlela 140kW ne-xDrive30d yona eno-195kW. Ezikaphethroli zimbili uzifica kwi-sDrive20i enamandla angu-135kW neM40i yona efuqa 285kW.
Zonke zino-gearbox oyi-8 speed Steptronic. Yize ngingazishayelanga zonke kodwa i-xDrive20d engiyizwile amandla iwathumela kahle emasondweni akukho lapho ixakeka khona. Amagiya iwashintsha ngesikhathi futhi uze ukhohlwe ukuthi udizili ngoba ithule. Ebengihamba ngayo yi-M sport obekwenza ubuye uwuzwe umgwaqo ukuthi unjani kwesinye isikhathi ngenxa yamasondo amakhulu kodwa akuyona into ekhalisayo. Abashayele iM40i abawuvali umlomo.
Kwezokuphepha uma uthanda ufaka iDriving Assistant Professional eyenza ibe ne-Active Cruise Control futhi iyakusiza uhlale emzileni. Uma ungena endaweni yokupaka iyakhumbula ungene kanjani bese iyazihlehlela futhi uma uthanda uyakwazi ukuqopha ama-video alapho ikhona.
BMW sDrive18d - R895,658
BMW sDrive20i - R939,798
BMW xDrive20d - R997,176
BMW sDrive18d M Sport - R935,658
BMW sDrive20i M Sport - R979,798
BMW xDrive20d M Sport - R1,037,176
BMW xDrive30d M Sport - R1,210,764
BMW M40i - R1,415,042